Apartment Sale (ID-232) အား စမ်းချောင်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Apartment Sale (ID-232)
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၄၉ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 106 (+1)
Apartment sale in Sanchaung Township, near Sanchaung Market. Living area - 1500 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Four air-conditioners and Generator are already included. Apartment has Lift.
Asking Price - 1600 Lakhs (Nego)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းဈေးအနီးရှိ ရောင်းရန်တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအကျယ် - ၁၅၀၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊်ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများ ဖွဲ့စည်းပါရှိပါသည်။လေအေးပေးစက် လေးလုံးနှင့် မီးစက်များ အသင့်ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။ ဓာတ်လှေကားပါရှိသည့် တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။
တိုက်ခန်း၏ အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၁၆၀၀ (ညှိနှိုင်း)
A Nice penthouse for Rent in San...
#SanchaungCondo Penthouse for re...
The Luxury Apartment with MORE V...
အမည်: Apartment Sale (ID-232)